I-White Dwarf Stars kwi-Run!
Imibono evela kwiHibble Space Telescope
Izazi zeenkwenkwezi zasebenzisa i-Hubble Space Telescope ukuhlalutya ama-3 000 amhlophe angama-white angamaqela angama-47 eTucanae globular, aneminyaka eyi-16,700 ekukhanyeni kwi-Milky Way ye-Galaxy ye-constellation yaseTucana. Ngaphambi kwezi mboniso zeHubble, izazi zeenkwenkwezi zazingakaze zibone i-belic conveyor belt in action. I-NASA, i-ESA, kunye noHrrher noJeil (iYunivesithi yaseBrithani Columbia, iVancouver, Canada) Ukwazisa: J. Mack (STScI) kunye noG. Piotto (iYunivesithi yasePadova, eItali)
Umthendeleko amehlo akho kule nqoqo ye- globular enhle. Kubizwa ngokuba ngu-47 iTucanae, kwaye kubonakala kubabukeli kwilizwe elikusezantsi. Iqulethe amakhulu amabili eenkwenkwezi ezipakishwe kwindawo yendawo engama-120-ukukhanya kwiminyaka yonke. I-Hubble Space Telescope ibhekisele kule qela ngokuphindaphindiweyo, ngezixhobo ezahlukeneyo, ukuqonda iintlobo zeenkwenkwezi eziqulethweyo kunye nokuziphatha kwazo. Uphononongo olutshanje luchaza abantu abamhlophe abamhlophe abawenza isalathiso ngaphandle kwesiko "isixeko" sesehlo kunye nokuya kwi "dolophu".
Kutheni benokukwenza oku? Iqoqo linamanye inkwenkwezi ezininzi eziye zafudukela kuyo. Apho bahlala khona, bevuya ngokuvuyela izigidi okanye iibhiliyoni zeminyaka. Kodwa, iinkwenkwezi zibuye ziphele kwaye zife, kwaye njengenxalenye yenkqubo, zilahlekelwa ngumlinganiselo. Ezinye iintlobo zeenkwenkwezi zinciphisa phantsi ukuba zibe mhlophe, xa zilahlekelwe ngokwaneleyo, zinokuthi zihambe ngokukhawuleza kunokuba ziba ziqhwaba. Bavame ukuthatha isivinini kwiimpawu zabo, benze indlela yokuphuma kwinqanaba eliphambili.
Ngokujonga nje iqoqo kwiibinculars okanye i-telescope encinci, awukwazi ukuxelela ukuba yiziphi iinkwenkwezi eziye zafuduka, kodwa i- Hubble zixhobo zenza ubuqhetseba ngokukhangela iimpawu ezithile zokukhanya ezivela kwiintlobo ezahlukeneyo zeenkwenkwezi kwiqoqo.
I-Galaxy Halo ijikeleze iAndromeda
Iingcali ze-astronomers ezisebenzisa uHubble zafumanisa igesi kwiHalo ye-Andromeda ngokulinganisa indlela eyayihlutha ngayo ukukhanya kwezinto ezikude eziqingqiweyo ezibizwa ngokuba yi-quasars. Kufana nokubona ukukhanya kwelanga elikhanyayo ngebhola. Oku kufumanisiweyo kukuthembisa ukuba izazi zeenkwenkwezi zininzi malunga nokuziphendukela kwemvelo kunye nesakhiwo senye yeendidi eziqhelekileyo zezidalwa kwindalo. NASA / ESA / STScI
Hayi yonke into eyenziwa yiHubble Space Telescope ebonakalayo ibe yinto enhle . Ezinye zezinto ezithandekayo kakhulu azifumani ngathi zininzi. Kodwa, kulungile, kuba ngamanye amaxesha ukufumanisa okulungileyo kukufihliwe ngokucacileyo.
Nasi umzekelo omhle. Izazi zeenkwenkwezi zasebenzisa uHubble ukuba zijonge ukukhanya ukusuka kwiikasta ezikude njengoko zihamba ngaphaya kweGlue Andromeda . Lo ngumlindi wesigxina osondelene naye kwisithuba kunye nento onokuyibona ngeaso isohlwayo kwindawo ebonakalayo ebumnyama-esibhakabhakeni. Umbuzo omkhulu wezinto zeenkwenkwezi wayefuna ukuphendula wukuthi: ingakanani igesi ehlangene neAndromeda?
Kuyaziwa ukuba indawo phakathi kwemiqolo ayiyiyo. Kwezinye iindawo kwindalo yonke, igcwele igesi. Kwimeko yeAndromeda. Kwaye, izazi zeenkwenkwezi ziyazi ukuba le ntlupheko ibangaphezu kwamaxesha amathandathu kunye namawaka aphindwe kabini kunokuba ayesazi. Ekubeni ubunzima bekungabonakali njengeenkwenkwezi okanye i-nebulae, yintoni na?
Izazi zeenkwenkwezi zenza i-telescope ukuba ibuke kwii-quasars ezikude. Kufana nokuma kummandla okhuni kunye nokukhangela izibane zeemoto ezikude. Njengoko ukukhanya kwe-quasar kwasasaza ngegesi ejikeleze iAndromeda, yatshintsha ukukhanya. Utshintsho alubonakali kwamehlo ethu, kodwa kwisixhobo esikhethekileyo esibizwa ngokuba yi-spectrograph, siphume kakuhle. kwaye kuboniswe ukuba iAndromeda ijikelezwe i-halo yegesi elishisayo, echanekayo. Ubunzima beli gesi liphezulu kakhulu kangangokuthi inokwenza esinye isiqingatha seenkwenkwezi.
I-Hubble Spots I-13-Billion-ubudala ubudala ubudala ukusuka kwiGalaxy ephakathi
Umfanekiso we-Hubble Space Telescope wesigxina esisekude kakhulu esiqinisekisiweyo esasigcinwe ngoku. Kukho ngaphezu kweebhiliyoni ezili-13 kwiminyaka edlulileyo. Umfanekiso osondeleyo we-infrared of the galaxy (inset) unemibala eluhlaza okwesibhakabhaka njengesikhokelo sawo omncinci, kwaye ngoko ke i-blue, inkwenkwezi. I-NASA, i-ESA, uP. Oesch kunye no-I. Momcheva (iYunivesithi yaseYale), kunye ne-3D-HST kunye ne-HUDF09 / i-XDF
Nantsi enye umfanekiso engabonakali kangako uze uqonde oko kuthetha. I-Hubble Space Telescope igxininise kwinqanaba kwindawo equlethe izinto ezazikhona xa indalo yayingama-13.2 bhiliyoni ubudala. Kudala kudlulileyo ukuba indalo yayisemncinci.
Yintoni le nto? Liya kuba yinto elalikude kakhulu eyayibona. Kubizwa ngokuba yi-EGS-zs8-1, kwaye ngexesha ekuphumeni kwayo, kwakukho izinto eziqaqambileyo kunye nezona zinto zininzi kwiindawo zakudala.
Kulo mfanekiso, kubonakala ngathi i-british, i-blob encinci, kunye nokukhanya kwayo emhlophe kunye nokukhanya kwe-ultraviolet kuye kwahamba iminyaka engama-13.2 yezigidigidi zeHibble , iTelescope ye - Spitzer Space kunye ne-WM Keck Observatory eHawai'i ukufumana ukukhanya okufutshane . Ukukhanya kwethalali kuye kwanyiswa kwaye kugcinwa kwinqanaba le-infrared infrared as space stretches kwaye lihamba ngaphesheya kwaloo mgama omkhulu.
Yintoni elandelayo malunga neenkwenkwezi zeenkwenkwezi? Baza kufunda iinkwenkwezi zokuqala kule mlalana ukuze baqonde indima abayidlale kuyo yonke indawo.
I-Gamma Rays: I-Radiation enamandla kakhulu kwi-Universe
Ukufumanisa kunye neenkcukacha ze-Icy, i-Remote Kuiper Belt
Uluhlu lwangaphakathi ngaphakathi kwiPlanethi yokuzalwa
Izazi zeenkwenkwezi zithandana ngokubanzi kwiBlobs kwi-Space
Uncedo lweenkwenkwezi zeenkwenkwezi zichonga iGalaxies
I-Pluto: Yintoni esiyifundayo ngokuQaphela kokuQala
Kutheni i-lb i-Symbol yamapounds
Ukujonga kwiinqununu ezisixhenxe ze-Unitarian Universalism
I-Eocene Epoch (i-56-34 yeMillion Years Ago)
Ulungiso lweCorwin, Ubugqila kunye no-Abraham Lincoln
Iprofayile ye-Roman God Jupiter
I-Socialology ichaza ukuba kutheni abanye abantu bekopela abo bafazi babo
Ihlabathi Elinqabileyo Elingummangaliso we-Ancient Arian Greek Singer Arion
6 Impawu zokuBhala
I-Knowledge Encyclopedia - Ukuhlaziywa kwencwadi
Yiya kwiBhodi nge '90s-Themed Cruises
Ziyiphi i-Mirror Neurons kwaye Zithinta njani ukuziphatha?
I-Chemistry 101 - Isingeniso kunye neNgxelo yezihloko
Ingqwalasela yokuthenga okanye yokuqeshisa imoto
Imizobo ye-Canadian Artist Lawren Harris
Yiyiphi Imfihlelo Yeendaba Ezingxelo Ezipheleleyo? Ukufumana Zonke Iimpawu.